कुनै हालतमा नेपाल लाइफको बोनस दर घट्दैन, घटे समिति जान्छौंः तिवारी| Corporate Nepal
माघ ५, २०७८ बुधबार १३:४७
काठमाडौं । बीमितहरुलाई आकर्षक बोनस दिँदै आएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस दर फ्युचर बोनस प्रोभिजनले घट्ने अडकल गरिँदै आएको थियो । उक्त प्रोभिजनका कारण बोनस दर घटाउन नहुने भन्दै नेपाल लाइफका अभिकर्ताहरु बीमा समिति घेर्नसमेत पुगेका थिए ।
बोनस दर निर्धारणमा प्रायः पहिलो नम्बरमा रहँदै आएको यो कम्पनी यसपटक भने त्यो अग्रता कायम गर्न त्यति उत्साहित देखिएको छैन । फ्युचर बोनस प्रोभिजनले सबै बीमा कम्पनीको बोनस दरमा हेरफेर हुने जानकारी नियामक बीमा समितिले दिए पनि नेपाल लाइफ भने चुपचाप रहँदै आयो ।
तर नेपाल लाइफकै अभिकताहरू भने बोनस दरको विषयमा विभाजित भए । नेपाल लाइफमै कार्यरत समग्र अभिकर्ताहरुका नेता तथा पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारी बोनस दर नघट्ने कुरामा ढुक्क देखिन्छन् । उनले कर्पोरेट नेपालसँग गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तैः
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सभित्र एउटा यस्तो समूह परिचालित छ जसले सधैं संघलाई कमजोर बनाउनका लागि काम गरिरहन्छ । ती मान्छेहरू नेपाल लाइफको व्यवस्थापनसँग नजिकिने गर्छन् ।नेपाल लाइफको बारेमा बजारमा विभिन्न अफवाह आउनुमा पनि त्यही समूहको हात छ । भित्रीरूपमा मिलेमतो गर्दै २० वर्षदेखि बीमितको हकहितमा काम गर्दै आएको पेशागत अभिकर्ता संघलाई कमजोर बनाउनु उनीहरूको उद्देश्य हो ।
भोलि बीमित रहेनन भने अभिकर्ता पनि रहदैनन् । अहिले बीमा कम्पनीले बीमितलाई २० रूपियाँ बोनस दिएर बीमा बेचिरहेका छन् । ती कम्पनीलाई कसैले पनि नराम्रो भनेको छैन । बीमा गर्दा कम्पनीपिच्छे लाग्ने पैसा एउटै हो । तर यसमा बीमितले कति लाभ पाए ? भन्ने कुरा पनि मुख्य हुन्छ ।
अहिले एक लाख रूपियाँको बीमा गर्दा कसैले दुई हजार, कसैले पाँच हजार तथा कसैले सात हजार रूपियाँ प्रतिफल पाएका छन् । तर, बीमितलाई पर्न गएको असरका बारेमा नियामकले पनि हेरेको छैन् । नियामक निकायले पनि यसको बारेमा ध्यान पुर्याएको छैन । यही ठाउँमा २५ करोड लगानी गरेका मालिकले १० अर्ब खाइसके, तर २५ करोड लगानी गरेका जनताले ४० करोड रूपियाँको पनि प्रतिफल पाएका छैनन् ।
हिजो बोनस एक रूपियाँ पनि घटाउन सक्दिन भनेको कम्पनी आज किन घटाउन लागि परेको छ ? यो त गड्यौलालाई माछो फालेर पासो थाप्दै मार्न लाग्या जस्तो हो । बोनसको समस्या अहिलेको मात्रै नभई दुई दशकदेखि गुज्रिएको छ । बीमा समितिले बोनसमा केही पनि कडाइ गरेको छैन । कम्पनीले बीमा समितिमा गएर मिलेमतो गर्दै मनलाग्दी बोनस घोषणा गर्छन । हामीले त यही खराब भयो यसलाई रोक्नु पर्छ भनेका हौं ।
मुद्दती निक्षेपमा राखेको पैसा बाड्न पनि मनलाग्दी घट्बढ गराइएको हुन्छ । नेपाल लाइफको बोनस घट्यो भने बीमा समितिले हामी अभिकर्तालाई सही कारण बुझाउन जरूरी छ । दश जना मान्छे उफारेर तोडफोड गरेको जस्तो गरेर यथार्थ लुकाउन खोजिएको हो । बोनस घटाउने कुरा बीमा समिति र नेपाल लाइफको नचाहिँदो नाटकीय मेलमिलापको कुरा हो ।
दशकौं प्रशासन क्षेत्रमा काम गरेका बीमा समितिका अध्यक्षले बीमा क्षेत्रलाई मिलाएर लान जरूरी छ । व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्नुपर्ने त केही पनि छैन् । तर नेपाल लाइफमा पछिल्लो समय भएका बोनसका गतिविधिले एउटा अन्तरक्रिया गर्न जरूरी भइसकेको छ । बोनस दर घटेमा हामी बीमा समितिसँग पनि छलफल गछौं । समिति र एक्चुरीले अभिकर्ताको चित्त बुझाउन जरूरी छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ओझा आएसँगै दुई आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउन सफल
बजेटमा बीमा क्षेत्रको सुझावः सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्नुपर्नेदेखि बीमा नीतिको मागसम्म
शिखर इन्स्योरेन्सको भरतपूर शाखामा कार्यरत महिला कर्मचारीको करेन्ट लागेर मृत्यु
मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुको बोनस घट्ने सम्भावना, समिति भन्छ– एक्चुरीकै हातमा छ
लाभांश पारित गर्न नेपाल इन्स्योरेन्सले बोलायो साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?